Fanimbazimbana ataon'ny solontenam-panjakana
2011-01-17 @ 22:06 in Andavanandro
Tao amin'ny Boriborintany be mponina indrindra teto Antananarivo renivohitra ny Asabotsy lasa teo no nitranga ity raharaha ity. Mazava loatra fa fisoratam-panambadiana no resaka mandritra izany andron'ny asabotsy izany amin'ireny Boriborintany ireny raha eto an-drenivohitra fa eny amin'ny Lapan'ny tanàna kosa any amin'ny faritra hafa. Tsy aritra satria karazany voasimbazimba ny hasin'ny fanambadiana ary ny solontenam-panjakana ihany amin'ny alalan'ny "délégué au maire", ny mpiandraikitra ny sora-piankohonana, no tompon'andraikitra voalohany amin'izany fanimbazimbana ny hasin'ny fanambadiana izany.
Raha ezaka manokana any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara ny mampanoratra ny fanambadiana any amin'ireny tranom-panjakana natokana ho amin'izany ireny dia toa karazandrazan'ny fanorisorenana ny olona tsy hazoto hisoratra kosa no tsapa raha ny nataon'ity tompon'andraikitra iray eto Antananarivo ity no tarafina. Te-halaza amin'ny hafa ve amin'ny alalan'ny fampihomehezana sa te-hamela fahatsiarovana tamin'ny fandalovan'ny olona amin'ny toerana toy ireny fa toa fanimbazimbana ny safidin'ny olona hisora-panambadiana indray no tsapa ary fahatezerana no entin'ny olona mody.
Toy ny miainga amin'ny fanontaniana hoe dia tianao, tsy nisy faneriterena mivantana na ankolaka, tokoa ve i... ny resaka dia anontaniana ny fomba nahitana ilay olon-tiana isoratam-panambadiana ka tadiavina hotantaraina ho ren'ny Besinimaro. Avy amin'ny valinteny ataon'ilay olona amin'izay no ivoahan'ny faniratsirana ankolaka ilay olona iray, sy ny fampanomezana valiteny diso ilay anontaniana mba hataon'ny mpanatrika fihomehezana ilay olona nisoram-panambadiana. Tsy mbola nisy nanatrika zavatra toy ity tao amin'ny Boriborintany be mponina indrindra ity eto Antananarivo izay rehetra nanontaniana fa nisy kosa ny nanamarika fa toy izany mihitsy no nataon'io rangahy io (olona roa ry zareo no mifandimby mitarika ny fotoana tamin'io andro io).
Tsy mitsahatra ny fampihomehezana ny mpanatrika raha tsy efa mijanona tsy mamaly intsony sady tsy mitsiky intsony izy roa anontaniana, dia atao ny sonia dia asaina mandeha mivoaka ny efi-trano malalaka izy roa sy ny mpanotrona. Anatranatra sy toro-hevitra vitsivitsy no andrasan'ny rehetra raha mandeha amin'ny sehatra toy ireny kanjo ny mifanohitra amin'izany no hita ka manala baraka ny hasin'ny fanjakana sy ny fisoratam-panambadiana ilay izy. Toro-hevitra avy amin'iray amin'ireo mpanatrika moa ny filazana hoe: "Fitiavako azy no ahatongavako eto hisora-panambadiana ary aoka hotazoninay ho tsiambaratelo ny tantaram-pitiavanay."
Ny zavatra hafa voamarika moa dia lava dia lava ny fotoana rehefa vazaha ny iray amin'ilay misora-panambadiana (mihoatra ny atsasakadiny aza) fa zara raha mihoatra ny dimy minitra kosa izany raha samy Malagasy no manatontosa izany fisoratana izany. Toa taratr'ilay mbola voazanaka ara-tsaina hatrany. Ny zatra ny toerana moa dia nilaza fa tamin'io andro io no nisy fisoratam-panambadiana iray be vazaha nanatrika indrindra satria manodidina ny roapolo teo ho eo no isan'izy ireo. Ny hatramin'izay manko zara raha voaisan'ny tanana iray izy ireny manatrika fotoana tahaka itony eto Madagasikara.
Jentilisa 18 janoary amin'ny 00:07